केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: याद
थामेकि थिए अन्तरआत्मामा यादहरु धेरै धेरै पैले
अति निष्ठुरि नै बनि बस्यौ तिमी त्यहा जैले तैले
धेरै दिन पछि सम्झनाका पोकाहरु आज फोरे मैले
यहि निहुमा मनका भाव दुइ चार हरफ कोरे मैले
ढुँगालाइ नै नौनि बनाइ पगाल्ने सोच बनाइन कैले
समयले डाडा काट्यो बल्ल पछुतो लाग्दैछ निकै एेले
बिश्वास धेरै गरेकि या मायै गर्न जानिन कुन्नि मैले
टाढा रहि सम्झनाका कुइनेटामा बिताए समय धेरै पैले
यहि निहुमा मनका भाव दुइ चार हरफ बनाइ कोरे मैले
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 4:59 PM
पीडा हुदा निकै भावहरु पोखिन्छन् यो सत्यकुरा हो।। त्यसैले पीडालाई बोध गर्न सक्नु पनि ठूलो कुराहो.. मनका कुरा पोख्नु भो अब लाग्छ हल्का भयो कि।। निकै राम्रो छ है म बह...
हा हा दाइ एसो सिकी हेरेको नि कविता लेख्न। मनका खुल्दुलि फालिदिए साथी भाइ माझ साच्चै मन हल्का भो हा हा हा
मनु जी मिठो छ। पढिरहन पाइयोस हजुरका भाव यसरि नै ।
Bed Nath Pulami said...
यहि निहुमा मनका भाव दुइ चार हरफ बनाइ कोरे मैले...
आहा कति मोठो भाव ...मनु जी निकै राम्रो .... हुन त कसैको याद निकै मिठो हुन्छ ! अनि त्यहि याद लेख्नु भा'छ कसरि भनौ म राम्रो छैन भनेर !
फेरी फेरी पनि लेख्दै गर्नुस है ... यस्ता यादहरु यानी यस्ता कविताहरु ...
सुर्य जी धेरै धन्यवाद । अनि उमेश जी लाइ पनि। हा हा हसाउनु भयो खासै त्यस्तो राम्रो त हैन तर हुन चाही कसैको याद साचै मिठो हुन्छ ।
lau lau dherai ramro chha
sachchi nai jindagi socheko jastai sadhhai hundaina
katipaya kura haru ko mittha yaad ma nai simit hunchhan
biteka din samjhinda tesai ramailo lagchha
ajha mitha yaad haru..........